Kamiin Ka Dhacay Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Kamiin Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.
Weerar dhabba gal ah ayaa loo dhigay kolanyo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Kamiinkan waxa uu sigaar ah kaga dhacay agagaarka Isgoyska Ex-controol Balcad ee magaalada Muqdisho,iyadoona kolanyada maleeshiyaatka dowlada ee kamiinka loo dhigay ay ka koobnaayeen Saddex gaari oo isugu jirta Labo Qooqan ah iyo Cabdi Bile.
Goob joogayaal waxey sheegeen in kolayadii maleeshiyaatka dowlada Ridada ee goobta marayay ay la kulmeen weerar culus oo dhabba gal ah waxeyna intaasi ku dareen iney jirto khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo maleeshiyaatka Murtadiinta lagu gaarsiiyay kamiiinka.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa tan iyo markii la guda galay Bisha Ramadaan sii kordhiyay weerarada ka dhanka ah dowlada Farmaajo iyo kuwa Kufaarta Afrikanta ee ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho.